मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर, फेरि चुक्यो सरकार – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०८:५१ English
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ५ मंसिर । मूल्य वृद्धि चुलिँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास सकिँदा मुल्य वृद्धि ६.२१ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा मुल्यवृद्धि ४.६८ प्रतिशत थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै मुल्यवृद्धि ६ प्रतिशत भित्रै राख्ने भनेपनि सरकार लक्ष्यबाट चुक्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ६.९५ प्रतिशत रहेमो मुद्रा स्फिती भदौमा ६.१६ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर असोजमा फेरि बढेर ६.२१ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साउन मसान्त सम्ममा भारतको मुल्यवृद्धि ३.२८ प्रतिशत मात्रै थियो । तर असोजमा आइपुग्दा ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा भएको मुल्य वृद्धिको असरका कारण नेपालमा थप महँगी बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्टका अनुसार सबैभन्दा धेरै मुल्यवृद्धि खाद्य तथा पेय पदार्थमा रहेको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रा स्फीति ५.५५ प्रतिशत छ ।
तरकारी, मासु तथा माछा, फलफूल र मसलाको मूल्यवृद्धि उच्च रहेको छ । घरायसी उपयोगिताका वस्तु तथा सेवा, लुगा तथा जुत्ताको मूल्यवद्धि पनि उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
क्षेत्रगत आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा ८.१४ प्रतिशत, तराईमा ५.७५ प्रतिशत, पहाडमा ४.८९ प्रतिशत र हिमालमा ५.११ प्रतिशत मुद्रा स्फीति रहेको छ ।
५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:२६ मा प्रकाशित